Fitsarana maimaim-poana Disney Plus (2020) - Ampandehano ny streaming 7 andro - Tolotra
Ianao ve mitady Disney miampy fitsapana maimaimpoana? Te hanandrana ireo seho alohan'ny ahazoana ny famandrihana? Nahazo anao izahay. Miaraka amin'ny torolàlana tsikelikely, afaka mitaky mora foana ianao Disney miampy fitsapana maimaimpoana.Hatramin'ny nitrangan'ny areti-mandringana, ny streaming dia iray amin'ireo zavatra tena tianao atao ho an'ny rehetra. Betsaka ny olona nanomboka nandevozin'ny indostrian'ny fialamboly, ary nitombo ny filàna sehatra fitaterana bebe kokoa.
Disney plus dia nanolotra fisedrana maimaim-poana ho an'ireo mpampiasa izay tia ny sehatra fandefasana sy ny seho ataon'izy ireo. Nisy fisalasalana lehibe teo amin'ireo mpampiasa manerantany momba ny fomba ahazoan'izy ireo mampiasa Disney sy ny andrana.
Disney Plus manolotra fitsapana maimaimpoana 7 andro:
Samy tia fitsapana maimaimpoana daholo isika, sa tsy izany? Disney plus dia manolotra fisedrana maimaim-poana ho an'ireo mpampiasa azy; Na izany aza, dia nijanona izy ireo tamin'ny Jona 2020. Saingy tsy tokony hatahotra ianao, ary manana safidy hafa mahafinaritra izahay.
Miaraka amin'ny fanampianay, azonao atao ny manandrana haingana ny andrana maimaimpoana mandritra ny fito andro. Izahay dia nahita torolàlana iray tsikelikely mba hanampy anao hitaky Disney tsara miampy fitsapana maimaimpoana.
Fitsarana maimaim-poana amin'ny Netflix
Dingana ahafahanao mahazo ny fitsapana maimaimpoana Disney Plus:
Ny fitakiana ny fitsarana Disney Plus Free dia mora be miaraka amin'ny torolàlana tsikelikely.
Dingana 1: Tsidiho ny tranonkala ofisialy
Tsindrio ny rohy.Miaraka amin'ny rohy misy anay, hoentina mankany amin'ny tranokala ofisialin'ny Disney Plus ianao. Tsindrio eto raha hitaky ny Disney Plus. Azonao atao ny mijery ny tranokala mba hahitana ireo seho isan-karazany ho hitanao miaraka amin'ny Famandrihana Disney Plus tokana. Raiso ny famandrihana Disney plus izay mitentina $ 13, izay misy ny ESPN plus sy Hulu.
Dingana 2:Fandoavana tanteraka
Ampidiro ny antsipiriany momba ny karanao sy ny fandoavam-bola feno hankafizanao ny drafitra mandritra ny herinandro.
Ny fanafoanana no mora indrindra amin'ny rehetra. Mba hitakiana ny fitsarana maimaimpoana, nefa tsy mandoa vola na iray aza, dia alao antoka fa foanana ny famandrihana alohan'ny hifaranan'ny andrana 7 andro.Midira avy amin'ny kaontinao ary mandehana amin'ny antsipiriany momba ny faktiora ary kitiho ny fanafoanana ny famandrihana; ny fandoavam-bola dia homena ny kaontinao avy eo.
Ka io no ahafahanao mitaky mora foana ny fitsapana Disney Plus Free.
Inona no azonao jerena amin'ny andrana Disney Plus Free?
Mahafinaritra ny fitsapana maimaimpoana, natao hisarihana ny mpamandrika, ary ny fitsapana maimaimpoana dia manome anao fidirana farany amin'izay atolotry ny sehatra.Miaraka amin'ny fisedrana maimaim-poana Disney plus, afaka mijery izay tianao ianao, manomboka amin'ny Marvel ka hatrany amin'ny Star Wars sy Disney ary Pixar's. Fonosana iray ao anaty iray ihany izy io ho anao.
Aiza no misy ny fitsapana Disney Plus Free?
Ny zavatra iray tokony ho fantatrao momba ny Disney plus ny fitsarana maimaimpoana dia ny faritra-voafaritra. Tsy hahita fitsapana Disney plus any amin'ny firenena izay nanombohana ny Disney plus nandritra ny taona maro ianao. Any amin'ny firenena toa an'i UK sy Etazonia, toerana iorenan'ny lampihazo dia tsy hisy ny fitsarana maimaimpoana, fa ny firenena toa an'i Japon, izay natombok'i Disney plus, dia manome fitsapana maimaimpoana ho an'ny iray volana mpampiasa.
Iza no afaka hitaky maimaim-poana ny Disney Plus?
Sehatra maro no miara-miasa amin'ny Disney Plus hanolotra serivisy sy serivisy maimaimpoana maimaimpoana amin'ny vidiny mihena ho an'ireo mpampiasa. Izahay dia nanonona vitsivitsy etsy ambany ho anao.
1. Mpanjifa tsy misy tariby sy Internet an'ny Verizon
Verizon Wireless dia manolotra fomba maro ahafahan'ny mpampiasa mitaky Disney Plus maimaimpoana. Raha misafidy ny drafitra tsy misy fetra fanombohany na manao drafitra tsy voafetra bebe kokoa ianao dia afaka mahazo ny Disney Plus Free mandritra ny enim-bolana.
Izy ireo koa dia manana drafitra tsy voafetra bebe kokoa ary milalao drafitra tsy voafetra kokoa, izay manome anao fidirana maimaim-poana amin'ny Disney Plus sy Espn Plus ary Hulu koa. Zavatra iray mandritra ny androm-piainana ity, ary tsy misy fahataperana amin'izany.
2. Mpanjifa finday A.S.
Ny serivisy finday any Etazonia dia manome ny mpanjifa tsipika feno isaky ny kaonty; mahazo Disney Plus miaraka amina Hulu sy Espn plus bundle izay mitentina 13 $ eo ho eo ianao.Mitaky anao ny hanana andalana telo feno ho an'ny kaontinao, ary avy eo ianao dia afaka misafidy ny tenanao amin'ireo serivisy streaming maro natolotr'izy ireo.
3. Mpividy Chromebook
Fantatrao ve fa ny mpividy Chromebook vaovao dia afaka mangataka Disney Plus maimaimpoana mandritra ny telo volana?Rehefa manangana ny Chromebook anao ianao dia mandeha amin'ny pejy Web ofisialy Chromebook ary mahazo ny kaody fampiroboroboana ny Disney Plus.
Avy eo ampidino ny Disney plus avy amin'ny magazay kilalao, ampidiro ny kaody fampiroboroboana anao ary manomboka amin'ny Disney Plus maimaim-poana mandritra ny telo volana.
4. Nahazo Disney Disney maimaim-poana ireo mpiasa Disney Park
Raha mpiasa Disney park ianao izay miasa amin'ny valan-javaboary Disney toa ny Disneyland na Disneyworld, dia azonao atao ny mitaky famandrihana Disney Plus maimaimpoana.
Na izany aza, ny mpiasa dia tsy maintsy misafidy eo amin'ny valin'ny vavahady park Disney ho an'ny fianakaviany na Disney plus Subscription.
5. Tolotra mpikambana an'ny Delta SkyMiles
Azo ampiharina amin'ny mpikambana vaovao ihany, ny mpikambana ao amin'ny Delta Skymiles izay tsy manana Disney Plus amin'izao fotoana izao dia afaka manararaotra andrana mandritra ny tapa-bolana fa tsy ny herinandro iray izay zakan'ny rehetra.
Mila mandeha any amin'ny tranonkala ofisialin'ny Disney Plus ianao ary mampiditra ny kaody ho an'ny fitsarana. Azonao atao ihany koa ny mijery ny sidina Disney Plus amin'ny zotra manokana.
1Q. Manolotra fitsarana maimaimpoana ve i Disney Plus?
taona:Disney plus dia manolotra fitsapana maimaimpoana any amin'ireo firenena vao nanombohany toa an'i Japon, ary ho an'ny firenena hafa toa an'i Etazonia sy UK, afaka mandeha mandritra ny fito andro ny andrana maimaimpoana avy amin'ny mpitari-dalana anay.
2Q. Inona no fampisehoana azonao jerena amin'ny fitsapana maimaimpoana an'i Disney Plus?
taona:Ny fisedrana maimaimpoana Disney Plus dia mamela anao hijery ny seho rehetra amin'ny sehatr'izy ireo raha mbola manana fisedrana maimaim-poana ianao.
3Q. Ohatrinona ny vidin'ny Disney Plus?
taona:Ny fampifangaroana ny Disney plus, ny ESPN plus, ary ny Hulu dia handany $ 12.99 isam-bolana fotsiny.
Disney Plus dia sehatra tsara indrindra hamaliana ny filanao mikoriana rehetra. Manana seho tsara ho an'ny mpampiasa azy ireo amin'ny vidiny mahafinaritra. Azonao atao ny manamarina ny fizahan-toetra azy ireo maimaim-poana, izay manampy anao hijery izay fampisehoana azo alaina eo amin'ny sehatr'izy ireo.Azonao atao ny miditra amin'ny seho an-tampon'ny Disney ary mahazo miditra amin'ny seho fanatanjahan-tena ankafizinao ao amin'ny ESPN plus, ary seho mahafinaritra sasany ao amin'ny Hulu.
Makà karatra fanomezana Amazon maimaim-poana
Efa nijery Condor Season 2 ve ianao?
Blue Exorcist Season 3: Nohamafisina sa Nofoanana ve ny Daty Famotsorana?
tranonkala tsara indrindra hampidinana sarimihetsika
tranokala fanatanjahan-tena mivantana mivantana
ampitahao hulu mivantana sy antsamotady
miasa ve ny youtube dieny izao
ampandehano ny fandaharana amin'ny fotoana rehetra Apple TV
mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra maimaim-poana nefa tsy misoratra anarana
anarana mahafinaritra ho an'ny chat vondrona